[Video] LG G2: Otu esi agaghachi na Kit Kat Rom site na Android Official Lollipop na-enweghị mkpa maka Ngwaọrụ Flash | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | LG, ROM, Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Taa m kpebiri ịkọrọ ọhụrụ a bara uru nkuzi na video gụnyere, n'ihi na ọtụtụ arịrịọ natara site na dị iche iche na-elekọta mmadụ na netwọk nke Gam akporosis, nke ndị ọrụ LG G2 Model D802 bụ ndị gbanwere na nsụgharị gọọmentị nke Android 5.0 Lollipop si LG, na-eji omenala Rom dabere na ụdị Korea, F320K. Ha ekwenyeghi kpamkpam banyere njirimara onye ọrụ ọhụụ ma ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-enwe nsogbu dị iche iche dị ka nsogbu reboot na ihe ndị ọzọ.
N'okwu a, m ga-akụziri gị ụzọ ziri ezi falashing ihe mbụ LG Kit Kat Rom ọzọ, na-enweghị mkpa iji Flash ụjọ ngwá ọrụ akpọ Flash Ngwaọrụ. Rom ahọpụtara bụ onye ọrụ gọọmentị kachasị ọhụrụ, ndị 80220H, Rom nke ewepụtara ozugbo na nke mbụ KDZ gbanwere usoro ZIP ka ọ dị mfe nchapu site na mgbake gbanwere onwe ya, na-efunahụ Iweghachite onwe ya na enweghị ida ikike.
1 Etu esi gbanye Kit Kit LG Rom mbụ na-enweghị mkpa maka Ngwaọrụ Flash
2 Faịlụ dị mkpa ịlaghachi na Rom Kit Kat LG G2 D802 mbụ, na-enweghị Ngwaọrụ Flash na ịkwanyere mgbọrọgwụ na Iweghachite
Etu esi gbanye Kit Kit LG Rom mbụ na-enweghị mkpa maka Ngwaọrụ Flash
Ekwesiri icheta na vidio a bu n’obi maka ndi n’enye oru emelitere LG G2 ha na Android Lollipop site na ọdụ ụgbọ elu gam akporo 5.0 maka ụdị Korea F320K iji omenala a Rom nke ahụ dị n'ime Gam akporosis anyị kesara ụbọchị ole na ole gara aga.
Kedu ka ị ga - esi hụ na vidiyo agbakwunye na nkụnye eji isi mee, ebe m na - akọwa usoro dum site na nkwụsị, A ga-enwerịrị 10A JB bootloader nke mbụ ma ọ bụrụ na anyị ga-emelite na Kit Kat Rom ma ọ bụ CM12 Rom ma ọ bụ AOSP Rom. The JB Bootloader nzọụkwụ bụ dispensable ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ Flash a Cloudy G3 Rom ọzọ, ọ bụ ezie na mgbe ọ bụla anyị chọrọ laghachi a CM, AOSP ma ọ bụ mbụ Kit Kat ma ọ bụ Jelly Bean Rom anyị ga-Flash a JB10A Bootlaoder.
Faịlụ dị mkpa ịlaghachi na Rom Kit Kat LG G2 D802 mbụ, na-enweghị Ngwaọrụ Flash na ịkwanyere mgbọrọgwụ na Iweghachite
Anyị ga-ebudata faịlụ abụọ ahụ m hapụrụ gị n'okpuru na idetuo ha na-enweghị decompressing na esịtidem ebe nchekwa nke ọnụ, ma ọ bụ inwe ike ịnọ na a Pen Drive ime nhicha dị ọcha site na USB OTG, dịka m na-eme na vidiyo. Ndị gị nke na-enweghị eriri USB OTG, cheta na ịkwesighi ihichapụ ebe nchekwa dị n'ime, ma ọ bụghị na ị ga-ehichapụ faịlụ ndị depụtaghachiri dị mkpa maka ikpuchi LG Kit Kat Rom mbụ..
Femụwe arụmọrụ LG G2 D80220H
Ugbu a, ị ga-agbaso usoro nke vidiyo na nkụnye eji isi mee na ị ga-enwe ya ọzọ Android 4.4.2 Kit Kit na LG LG G2 D802 na-enweghị eji Flash Ngwaọrụ na idebe Mgbọrọgwụ na Iweghachite gbanwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » [Vidiyo] LG G2: Otu esi alaghachi na Kit Kat Rom site na Android Official Lollipop na-enweghị mkpa maka Ngwaọrụ Flash
Tomas Gonzalez dijo
bootloader ahụ na-arụ ọrụ maka d801
Zaghachi Tomas Gonzalez
Gustavo Tvip dijo
a kọwara nke ọma. Ọ jụrụ ihe kpatara na o kweghị ka ị wụnye mmelite kachasị su. Been nwewo ike idozi ya? Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike itinye njikọ mmelite ahụ? Daalụ
Zaghachi Gustavo Tvip
Ndewo, agbasoro m usoro ma enwere m ike ịwụnye super su na enweghị nsogbu. Daalụ.
Erick perez dijo
Ndi bootloader na-arụ ọrụ maka d805?
Zaghachi ka erick perez
Enyi usoro a ga aru oru na ihe nlere d805 na d806
Javier De Jesus dijo
ga-esi na cm12 rom laghachi na ngwaahịa ka m ga-agbanye bootlader?
Zaghachi Javier De Jesus
Ndewo FCo, emeela m ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mana mgbe ahụ n'amaghị ama, akpachapụrụ m onye ọzọ AKWLOADKWỌ AKW BOKWỌ, nke si na 20H ma ugbu a ọ na-enye m njehie boot boot na anaghị amalite. Ọ bụrụ na usoro ma ọ bụ mgbake. Nwere ike inyere m aka biko?
Enwere m ike ime ya na usoro vs980 4g
Kedu otu esi laghachite na kitkat na ụdị d805? Nkuzi a bara uru maka ihe nlere a? Daalụ
Zaghachi jose moreno
Olee otu m ga - esi mee ya?
ụdị a adabara d805 G2 si Colombia?
Enyi, emechara m usoro niile nke ị kọwara, enwere m ike ịwụnye rom, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana enweghị m ike ịbanye ọnọdụ nbudata ma ọ bụ mgbake, atụfuru m ihe niile, ekwentị m bụ lg g2 d802 32gb, enyi, ọ bụrụ ị nwere ike nweta m ihe ngwọta Mee ka m mara, ụjọ na-atụ m ịme ya. Somefọdụ n'ime gị n'ihi na achọghị m ịhapụ ekwentị m anaghị arụ ọrụ opekata mpe batara rom mana m abanyelarị n'ụdị a
Na iji wepu lollipo na L70 d320f8 ma tinye kit kat, olee usoro m kwesịrị ịme?
Enwere m ike ịhapụ njikọ ntanetị ngwa ngwa
Enyi, gbaghara nbudata gị, anaghị m ahụ ya ebe ọ bụla, oke mgbasa ozi na njikọ na-eduhie. Biko ị nwere ike ịnye m ụlọ ahụ 20v maka d802 16 gb.
Juan Vicente Rubio Rodriguez dijo
Ndewo, kedu ka m ga-esi laghachi kit kit 4.4.2 20y si AT% T's LG G2 D800, agbalịrịla m ihe niile na enweghị m ike ịchọta faịlụ mbụ ahụ.Enwere m nkwado ndabere TWRP mbụ, mana mgbe m gwụchara ọ na-egosi njehie. , mgbe ị na-etinye mgbake gbanwere ọ bụ na 2.7. Ugbua emelitere m ya na 3.0.1 ma mgbe ị na-eme ya na lg, ekwentị anaghị amata ya ma gosipụta njehie. Amabeghị m ihe m ga - eme, ọ ga - enyere m aka ịlaghachi na nke ngwaahịa. Biko kelee gị.
Zaghachi Juan Vicente Rubio Rodriguez
TOB eriri USB nwere ọtụtụ njikọ dabara n'ihe niile ma kwe nkwa njikọ ọsọ ọsọ na ịkwụ ụgwọ